Amatye okuzalwa eVirgo: iSapphire, iCarnelian kunye nePeridot - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Amatye okuzalwa eVirgo: iSapphire, iCarnelian kunye nePeridot
Amatye okuzalwa eVirgo: iSapphire, iCarnelian kunye nePeridot
Ngelixa iVirgo ineSapphire njengelona lilitye lokuzalwa layo, iCarnelian kunye nePeridot nazo zinxibelelana kakuhle nalo mqondiso. I-Sapphire yaziwa ngokuqhuba amandla eMercury, le yiplanethi elawula iVirgo.
leo mfazi libra man yohlukana
Abantu abakulo mqondiso banengqondo yokuhlalutya kwaye baqeqeshwe kakhulu. Xa benxibe la matye anqabileyo, baya kuba nethamsanqa kwaye bakwazi ukuzisa ubume babo basemhlabeni kuzo zonke iimvakalelo zabo kunye nokhangelo lomoya.
Isishwankathelo samatye okuzalwa eVirgo:
Isafire ingasetyenziselwa uxolo lwangaphakathi kunye nokuphuculwa kwengqondo
I-Carnelian lilitye labo bafuna ukufudumala okanye ukuba babe nayo yonke ingqalelo kubo
I-Peridot inokunceda nabani na ukuba banxibelelane nendalo kwaye bazikhusele kwingxolo yesixeko.
Igama leSapphire livela kwisiLatin nakwisiGrike, kwaye lithetha ukuba 'luhlaza okwesibhakabhaka' kuzo zombini ezi lwimi. Abanye bacinga ukuba ligama elinento yokwenza neplanethi iSaturn kwaye igama elithi 'isafire' lithetha 'othandekayo kuSaturn' ngaphezulu kolwimi olunye.
Nangona kunjalo, akunakuthiwa igama leli litye livela kuyo, kodwa ngaphezulu koko limele okunene. Kwaye oku bubuchule ikamva lomntu.
Uninzi lweenkwenkwezi kunye neengqondo zikholelwa ukuba abantu abadibaniswe nelitye banokwenza okufanayo kodwa bahluke kakhulu. Kungenxa yoko zonke zizodwa kwaye zingenakho ukufana okubonakalayo kunye nabanye kwaye ngakumbi abo banganxibanga ilitye.
I-sapphire yinto enxulumene nomoya kwaye inceda abantu ukuba baphucule. Ke ngoko, kufuneka isetyenziswe xa ufuna ukugcina ubomi bakho busemgceni.
Kukholelwa ukuba inamandla amakhulu ngaphezulu kwenguqu kunye nokunceda nabani na ukuba asebenze ngokukhawuleza. Ikwalilitye elidibanisa umphefumlo ne-Universe kwaye livule namajelo amandla amakhulu.
Abo bafuna ukunxibelelana neengelosi kunye nezikhokelo zomoya ngokuqinisekileyo kufuneka basebenzise iSapphire kwaye banxibelelane nelinye iLizwe.
Eli lilitye elinika abantu injongo ebomini kwaye lizise ikarma elungileyo yokuba umphefumlo ukhule ngokuvisisana. Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, inokusetyenziselwa uxolo lwangaphakathi kunye nokuphuculwa kwengqondo. Ithoba, izisa ukucaca kwaye iyanceda ekugxininiseni.
Abantu abaninzi bayayisebenzisa ukujongana nezifo zengqondo kunye novalo. Njengempahla, iSapphire ivela kusapho lwe-corundum kunye ne-aluminium oxide ebonisa ukwakheka kwi-trigons.
Ukudibana neRuby, umahluko kuphela phakathi kwala matye mabini ngumbala. Iirubhi zibomvu kwaye iisafire corundums zinemibala emininzi. Nangona kunjalo, umbala oqhelekileyo weSapphire uluhlaza okwesibhakabhaka.
Kuba iza ngemibala emininzi, uninzi lucinga ukuba lubhetyebhetye kwaye luluncedo kakhulu. Ubulukhuni bayo buphantsi kwenye yeDayimani, eyenzeka ukuba ibe li-10, kwaye yenze iSapphire ibe li-9.
Oku kuthetha ukuba iSafire lilitye elichanekileyo lobucwebe elinokunxitywa yonke imihla. Abantu abavela kwiminyaka ephakathi babekholelwa ukuba eli litye likhulu ngokuchasene nokungakhathali. Ngapha koko, yayikholelwa ekubeni ibiligugu eliphilisa nasiphi na isifo.
Ukukhanya okuboniswe yiSapphire kufana nesilika, ngelixa ezo zingafihlisiyo zingenambala zibizwa ngokuba yiLeucosapphires. Ezinye zeSafire zifakwe imibala kwii-shades ezimthubi kwaye ezinye zibonisa ubuqili obomeleleyo.
Ngokwesiqhelo usike imilo erhangqi kunye ne-oval, kukwakhona amatye asikwere kunye noxande lolu hlobo. Abo banxibe iSafire banomdla ngakumbi, banethemba kwaye bayazaliseka. Xa kuziwa kwimpilo yomzimba, eli litye linceda ukusebenza komzimba ngcono.
Abantu basebenzise iCarnelian kwiipropathi zayo zokuphilisa ukusukela kudala. Ngexesha eliphakathi, abo basebenzise amakristalu ukuphilisa basebenze ngeli litye ukukhupha uxinzelelo kunye noxinzelelo. IiVikings zaziwa ngokuba zisebenzisa ngaphezulu kunezinye.
Ifaka imibala yeorenji, ebomvu nebomdaka, iCarnelian isebenza ngokumangalisayo ngokuchasene nexhala nokwenza abantu badlale ngakumbi, ngokuzenzekelayo nangokufudumeleyo. Ayisiyonto inomtsalane kuphela, kodwa ikwasebenza ngokukuko kuba iyasebenzisana nee-chakra ezintathu zomzimba ongezantsi.
Abo boyika ukuthatha amanyathelo banokuguqulwa ngokupheleleyo yiyo kuba lilitye elinxibelelana nengcambu ye-chakra kwaye lithumela amandla aqinisekileyo kumbindi womzimba.
Uphawu lwe-6/27 lwe-zodiac
Ngapha koko, iphucula ubuchule kunye nokusebenza ngokwesondo. Amagcisa ayisebenzisa ukujongana neemvakalelo zabo xa kufuneka benze eqongeni, ngelixa abathandi beyisebenzisa kwiziphumo ezingcono kwigumbi lokulala.
Kuya kwanela ukuyigcina epokothweni okanye ukuyinxiba kwizacholo, kwaye iya kunika ukuzithemba ngokwaneleyo kuso nasiphi na isicwangciso esiza kwenziwa. Kulungile ukusiwa kudliwanondlebe, xa kufuneka wenze eqongeni okanye xa ujongene noxinzelelo olukhulu.
Abadlali abaninzi kunye nabadlali beqonga basebenzisa iCarnelian ukukhupha iitalente zabo ezifihliweyo kunye nokugxila njengoko eli litye laziwa ngokuzisa amacala amabini obuchopho.
Kanye njengeRose Quartz, inyusa ukusebenza ngokwesondo kwaye ikhuthaza uthando ukuba lukhululwe. Ukuba bobabini uCarnelian noRose Quartz babekwe kwi-chakra yentliziyo, uthando kunye nenkanuko yomntu zikhutshwa kwangoko.
Xa ibekwe kwicala elingezantsi lesisu, iyanxibelelana nengcambu ye-chakra kwaye izise ukuphilisa njengoko eli liziko eligcina abantu benxibelelana noMhlaba. I-Carnelian ayisiyongomeleza nje kuphela isibindi kunye nokuzithemba, ikwachaphazela negazi kwaye lenze ukuba lijikeleze ngcono emzimbeni.
Ilungele nasiphi na isihlandlo soxinzelelo, lilitye labadlali kunye nabo bafuna ukufudumala okanye banikwe ingqalelo kubo. Ukuba ufuna ukufumana okusemandleni akho, vele ubeke iCarnelian kwindawo yokuhlambela kwaye uyifake emanzini.
Kulungile ukwenza oku ngaphambi komsitho njengoko eli litye ligxotha uxinzelelo kunye naluphi na uloyiko. Phinda imantra yesibindi kunye nokuzithemba, kwaye izinto ziya kwenzeka kanye ngendlela ofuna ngayo.
IPeridot yikristale yeLanga, ilitye elikwaziyo ukusebenzisa onke amandla obomi kunye nokuguqula ubusuku bube ziintsuku.
Ifana nevithamini D kuba inxibelelene kakhulu neLanga kwaye inika abantu amandla okonwaba okanye okomoya ngakumbi. Ukukhanya kwePeridot kufana nokukhanya kwamandla, ulonwabo kunye nentliziyo elula.
Abo bafuna ukuziva imitha yelanga kulusu lwabo kwaye bonwabele amaxesha anje kufuneka basebenzise eli litye ngalo lonke ixesha. Ikhuthaza abantu ukuba bazive bebhetele, benze iminqweno kwaye banxibelelane nobuThixo.
Xa ujonga iPeridot, kunokwenzeka ukuba ubone iAntumn isebenza kuba inemibala emihle kwaye ikwazisa ubuninzi ngeli xesha lonyaka. Iiroyals zazinxiba ecaleni kwentliziyo yazo ukuze zitsale uthando.
Xa uhleli ekukhanyeni kwelitye, kulula ukuziva lonke uthando lwe-Universe kwaye uwele umntu ngaphandle kokuqonda ukuba zinganamandla kangakanani iimvakalelo ngaphakathi kwentliziyo.
I-Peridot inokunceda nabani na ukuba banxibelelane nendalo kwaye bazikhusele kwingxolo yesixeko. Xa lisetyenziselwa ukucamngca, eli litye lizisa ukukhanya okutsha komoya kwaye livula iihorizons ezintsha.
Le gem kudala isetyenziswa ngabo bafuna ukufumanisa i-Universe njengoko ibonisa ukukhanya wonke umntu eleqa kwaye egcina imimoya iphakanyisiwe. Uninzi lwamalungiselelo eFeng Shui alusebenzisa kwiimpawu zalo zokhuselo.
Zilungiswa njani iilayibrari zokuqhekeka
Ingasetyenziselwa izinto zokuhombisa kuba inemibala emihle kunye nesakhiwo esihle. Emva kokutsho imantra kuyo, beka nje umfanekiso oqingqiweyo wePeridot eMpuma okanye kwikona esemaZantsi mpuma yekhaya kwaye ulinde amandla alo ukuzisa ukuchuma kunye nempilo.
Ikwabizwa ngokuba lilitye lokufunda, le kristale isebenza ngokumangalisayo kugxino kwaye yenza ingqondo yamkele ulwazi olutsha. Kububulumko ukuyigcina eofisini kuba inika ukufikelela okuqhubekayo kokucaca kwengqondo, unyamezelo kunye nokucinga kwesayensi.
AmaRoma ayisebenzisa ngokuchasene nokudakumba, ke abo banosizi kufuneka bayigcine epokothweni okanye njengelitye elinqabileyo.
Baya kuziva bekhuthazekile kwaye bazixabise ngakumbi. Abaphilisi beCrystal bahlala bebeka izigulana zabo ekukhanyeni kwePeridot, ukuze bakwazi ukuwafumana onke la mandla elitye.
Umbala weVirgo: Kutheni iGreen ineyona Mpembelelo ilungileyo
Ukuhambelana kweVirgo Ethandweni
Uphawu lweVirgo Zodiac: Yonke into ekufuneka uyazi
Uhambo lweeplanethi kunye neempembelelo zazo
Ukuhambelana kweScorpio kunye neCapricorn yobuhlobo
Agasti 26 Imihla yokuzalwa
Inamba kunye nothando lokuhambelana nokuhambelana
Scorpio indoda taurus ukuhambelana komfazi
I-aquarius kunye ne-libra ebhedini
ipisces man leo umfazi ukuhambelana
utyikitye umntu onomdla kuwe